University of Hamburg - Higher Education na Europe
University of Hamburg Nkọwa
Students (ihe ruru.) : 42000
Echefukwala atụle University of Hamburg
Idebanye aha na University nke Hamburg
Universität Hamburg bụ kasị alụmdi na-emere nnyocha na agụmakwụkwọ na n'ebe ugwu nke Germany. Dị ka otu n'ime obodo ndị kasị ukwuu na mahadum, anyị na-enye a iche iche N'ezie ụdịdị dị iche iche na magburu onwe nnyocha ohere.
The University obụrede mbụre ọtụtụ interdisciplinary ọrụ na a sara mbara elu ugwu nke na-achị na ọtụtụ ihe na onye òtù ọlụlụ na netwọk na-eduga oru on a mpaghara, mba na mba n'ọtụtụ na.
Sustainable sayensị na mfọn
Universität Hamburg-agba mbọ ka nkwado na ihe niile anyị na ikike iche emeela oké strides kwupụta nkwado na nnyocha na izi.
magburu onwe nnyocha
na 2007 Universität Hamburg natara ego ihu ọma a ụyọkọ nke kacha mma na ihu igwe research dị ka akụkụ nke Germany si Ọkasị Initiative. ụyọkọ mkpụrụ osisi “Integrated Climate System Analysis na amụma” (CliSAP) bụ n'ụlọ ka a center enye nkà na ọzụzụ na ihu igwe nnyocha na ụwa usoro sayensị.
na 2012 Universität Hamburg natara ego maka ihe ọzọ ụyọkọ nke kacha mma, na Hamburg Centre maka Ultrafast Imaging (CUI): Structure, Dynamics na Control nke Ihe na Atomic n'ọtụtụ na, nke na-ekwu, ngagharị nke ụmụ irighiri akụkụ na ozugbo.
Key research ebe
E wezụga Climate, Earth, Environment, n'ihu ịga nke ọma isi research ebe-agụnye: Photon na Nanosciences, -agụ agụ n'Obodo Ọzọ, Neurosciences, Ofufe ọrịa Research / Structural Systems Biology, urughuru Physics, Astrophysics na Mathematical Physics, na Health Economics.
pụtara ìhè dịgasị iche iche: n'elu 170 agụmakwụkwọ na programmụ
Universität Hamburg awade mkpokọta 170 ogo omume na ndị na-esonụ asatọ ikike iche: Faculty of Iwu; Faculty of Business, Economics and Social Sciences; Faculty of Medicine; Faculty of Education; Faculty of Humanities; Faculty of Mathematics, Informatics na Natural Sciences; Faculty of Psychology na Human Movement; Faculty of Business Administration (Hamburg Business School).
Universität Hamburg na-ekwusi ọtụtụ ngosi ihe mgbe ochie na collections, dị ka Zoological Museum, naherbarium Hamburgense, na Geological-Paleontological Musuem, Botanical Gardens, na Hamburg Observatory.
fọrọ nke nta 5,000 mba ụmụ akwụkwọ si karịa 130 mba na-debara aha na anyị University.
Universität Hamburg-achọ ike mba nnyocha mgbalị mgbe amụba ya mba ọnụnọ na ndimenede agagharị, n'etiti ngalaba na ụmụ akwụkwọ ibe. N'ihi ya, anyị na-emepe emepe emeri na mmekọrịta dị na:
Aarhus University ke Denmark
Stellenbosch University ke South Africa
Macquarie University ke Australia
University of California Berkeley na United States
The State University of St. Petersburg na Russia
Fudan University ke China
Ọzọkwa, na University si ikike iche etolite n'ọgbakọ zuru ụwa ọnụ na netwọk gụnyere n'elu 300 onye mahadum.
Faculty of Economics na Social Sciences
Faculty of Education, Psychology na Human Movement
Service Department maka Evaluation
Department of Cultural History na Contemporary Culture
Faculty of Mathematics, Computer Science na Natural Sciences
Department of kọmputa sayensị
Center maka Bioinformatics
Center maka Forest Products
Ná mmalite nke narị afọ nke 20, ọgaranya ihe mere ọtụtụ na-arịọ na Hamburg Sineti na nzuko omeiwu na-arịọ na nguzobe nke a mahadum, Otú ọ dị ndị e mere ka o nweghị isi. Ọ bụ ezie na nke a oge, senator Werner von Melle na-akwado mmakọ nke ẹdude oru n'ime onye mahadum, a plan dara n'ihi na nke Parliaments mejupụtara n'ihi na mmetụta nke klas ịtụ vootu. Ọtụtụ nke oruru chọrọ ịhụ Hamburg nanị ya kasị ọrụ dị ka a trading center na ezere ma na-akwụ ụgwọ nke a mahadum na-elekọta mmadụ na-achọ n'aka nke professors na a ga-n'ọrụ.
Ọganihu Otú ọ dị, ebe-akwado echiche nke a mahadum tọrọ ntọala Hamburg Science Foundation (Hamburg Scientific Foundation) na 1907 na Hamburg chịrị mba Institute na 1908. Ihe mbụ na alụmdi na-akwado ndị mbanye ndị ọkà mmụta maka oche nke General nkuzi usoro na ego-nke nnyocha cruises, na nke ikpeazụ na-ahụ maka ihe niile agụmakwụkwọ na nnyocha ajụjụ banyere esenidụt n'ókèala. N'otu afọ, na na ụmụ amaala mma a na-ewu na saịtị ahụ na Moorweide na nguzobe nke a okwu ihu ọha ụlọ, nke meghere ke 1911 na mgbe e mesịrị ghọọ ndị Main Building nke mahadum. Otú ọ dị, atụmatụ maka ntọala nke mahadum onwe ya nwere na-etinye na a shelf esonụ ntiwapụ nke Agha Ụwa Mbụ.
Mgbe agha, mbụ unu kpamkpam hoputara okenye họrọ von Melle dị ka onyeisi obodo. Ọ na Rudolf Ross mere a push maka muta mgbanwe na Hamburg, na ha iwu guzosie ike mahadum na a Adult ụlọ akwụkwọ sekọndrị akpatre wee site. on March 28, 1919 na University nke Hamburg meghere ọnụ ụzọ ámá ya. The ọnụ ọgụgụ nke zuru professorships na Hamburg ama ọkọri si 19 ka 39. Ma ndị chịrị mba Institute na General Lecture usoro e etinye obi gị dum n'ime mahadum. The mbụ ikike kere site na mahadum ndị Iwu na Political Science, Medicine, Philosophy na Natural Sciences.
N'oge Weimar Republic, na mahadum na-eto n'ime mkpa ngwa ngwa. Ọtụtụ puku ụmụ akwụkwọ na-nọgidere debara aha, na ya sere ndị ọkà mmụta dị ka Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Aby Warburg na Ernst Cassirer na Hamburg. The ọnụ ọgụgụ nke zuru professors nwere site 1931 toro na 75. N'ihi na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-ata ahụhụ n'ihi ihe ọjọọ ọnọdụ akụ na ụba na ike ná mmalite Republic, na Hamburg Association of Student Aid e hiwere na 1922. Ernst Cassirer ghọrọ isi nke mahadum 1929, otu n'ime ndị mbụ ndị Juu ndị ọkà mmụta na-eme otú na Germany.
The agụmakwụkwọ ọnọdụ gbanwere ngwa ngwa mgbe ntụli aka na March 1933. Ugbua na May 1 nke afọ - mahadum ẹkenịmde a ememe na-asọpụrụ Adolf Hitler dị ka ya onye ndú. Oke ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmetụta ndị Nazi soro, tinyere mwepụ nke akwụkwọ si ọba akwụkwọ na mmanye egwu megide ọkọdọhọ iro nke ndị mmadụ. Banyere iri ise ndị ọkà mmụta sayensị, tinyere Ernst Cassirer na William Stern, aghaghị ịhapụ na mahadum.
Ọ dịkarịa ala akwụkwọ iri na-arụ ọrụ na White Rose na Hamburg na-enyo enyo na jidere; anọ n'ime ha nwụrụ n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ e gburu. Na zo obom nke okwu ihu ọha n'Ụlọ Nzukọ a imewe site Fritz Fleer echeta efere e weere na 1971 na ebe nchekwa nke anọ na-eguzogide alụso n'ala.
Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ, na mahadum e kpọliteghachiri na oyi nke 1945 na 17800 ọrụ. Ọ nke 2.872 ụmụ akwụkwọ ndị e debara na Mahadum nke Hamburg ke akpa agha ọkara afọ agụmakwụkwọ nke 1945/46, 601 e kwetara na nkà ihe ọmụma, 952 na Medical na 812 na ngalaba nke Iwu na Political Science. The kasị nta nọmba sonyeere Faculty of Mathematics na Natural Sciences na 506 ụmụ akwụkwọ na ngụkọta. The mbụ na-amụrụ mkpakọrịta n'oge a nọ na-hoputara na 1946 n'okpuru British elekọta, na na ọ kpụrụ ntọala nke AStA na 1947.
N'oge West German oge, ọhụrụ ngalaba e kwukwara na mahadum, ọtụtụ Ichi ngalaba Theology nakwa dị ka ngalaba nke Economic and Social Sciences na 1954. The mbubreyo 1950s na n'oge 1960 hụrụ a otutu ewu: na Mgbakọ na ọkà ihe ọmụma si Tower ebe eguzobe nso Von-Melle-Park, mgbe Botanical Institute na Botanical Garden a kpọgara ka Flottbeck. The mahadum na-eto si 12,600 ụmụ akwụkwọ na 1960 ka 19,200 na 1970. A ife nke ngagharị iwe n'oge na-amụrụ mmegharị 1968 edemede a mgbanwe nke mahadum Ọdịdị, na na 1969 na ikike iche na-etisasịwo na ihu ọma nke ndị ọzọ interdisciplinary ngalaba. Na-amụrụ na mkpara ndisịn idem na ochichi na-ike, na ụlọ ọrụ nke Rector kagburu na ihu ọma nke a mahadum president. Otú ọ dị, akụkụ nke mgbanwe ndị e mechara mechara kagbuo iwu na 1979. Ọzọkwa ewu na 1970 nwekwara wuru fọdụrụ ohere na isi campus nke Rotherbaum nkeji iri na ise, na Geomatikum ụlọ na Wiwi-bonka (aha ya bụ n'ihi na ya bonka-dị ka ije) ịbụ pụrụ iche mgbakwunye maka iri afọ. Kemgbe ahụ, ọhụrụ Njirimara meghere n'akụkụ ndị ọzọ nke Hamburg. Abụọ ụlọ ọhụrụ meghere n'akụkụ aka Main Building na 1998 na 2002, revitalizing Moorweide ebe nke mahadum.
na 2005, na Hamburg University nke Economy na Politics E mechakwara gbakwụnyeghachi akwụkwọ ụfọdụ n'ime University of Hamburg site a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị omume nke na-emegide site òtù abụọ. Na otu emume, na 17 ngalaba e mechakwara gbakwụnyeghachi akwụkwọ ụfọdụ restructured n'ime isii ikike iche. The mahadum nwekwara ibu na-eji mgbe nile, he nke ya ego site na steeti Hamburg. Mmejuputa iwu-nke Bologna usoro bụkwa isi mgbe esemokwu n'oge nke iri afọ. Nkuzi ụgwọ e ẹkenam na 500 euro na 2006, ma mgbe e mesịrị na-ebelata ka 375 euro na n'ụzọ zuru ezu kagburu 2012.
Ị chọrọ atụle University of Hamburg ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Hamburg na Map
photos: University of Hamburg ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Hamburg.